ओलीको भूमिका प्रगतिशील, प्रचण्डको नाजायज : मणि थापा – Sudarshan Khabar
ओलीको भूमिका प्रगतिशील, प्रचण्डको नाजायज : मणि थापा
काठमाडौं । नेकपा एकीकरण हुँदा गठित ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा तत्कालीन एमालेका २६ र तत्कालीन माओवादीका १९ सदस्य समेटिएका थिए । तीमध्ये एमालेमा प्रष्ट दुई गुट भएकाले केपी ओली पक्षमा १२ र माधव नेपाल पक्षमा १२ सदस्य प्रष्ट देखिए । बामदेव गौतम भने अस्थिर नै रहँदा उनी जता लाग्यो, त्यसको पक्षमा १३ सदस्य हुने भए ।
पूर्वएमालेभित्रको प्रष्ट विभाजनले स्थायी कमिटीमा प्रचण्डको पक्षमा सबैभन्दा बढी १९ सदस्य रहने भए । पछिल्लो समय अग्नि सापकोटा सभामुख भएपछि प्रचण्डको पक्षमा १८ सदस्य हुनुपर्ने हो । तर, सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल पनि बामदेवजस्तै देखिए ।
बादलमात्र होइन, पूर्वमाओवादीका लेखराज भट्टले प्रचण्डलाई खुलेरै साथ छाडिसक्दा प्रचण्ड पक्षधर स्थायी कमिटी सदस्यको संख्या १६ मा झरेको थियो । तर, नेकपाभित्र उत्पन्न पछिल्लो संकट र ओलीविरुद्ध प्रचण्ड माधव गठबन्धनको निर्णायक लडाइमा भने प्रचण्डले अरु पूर्वमाओवादी नेताहरुको समेत साथ गुमाउन थालेका छन् ।
ओलीले एकतर्फी रुपमा स्थायी कमिटी बैठक स्थगन गरेपछि मंगलवार प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यको बैठकमा पूर्वमाओवादीका चारजना स्थायी कमिटी सदस्य उपस्थित भएनन् । तीमध्ये एक हुन् मणि थापा ।
मणि थापा एक समय प्रचण्डभन्दा क्रान्तिकारी बनेर रविन्द्र श्रेष्ठसँगै माओवादी परित्याग गरेका नेता हुन् । पछि उनी प्रचण्ड समूहकै कोटाबाट नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य बने । तर, अहिले उनले आफ्नो पूर्वसमूहका नेता प्रचण्डलाई भन्दा केपी ओलीलाई प्रगतिशील देख्न थालेका छन् । प्रचण्डले माधव नेपाल समूहसँग नभई ओलीसँगै मिल्नुपर्ने थापाको अडान छ ।
पछिल्लो समय टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, चन्द्रप्रसाद खनाल र मणि थापा लगायतका नेता दुई अध्यक्षकै समझदारीमा महाधिवेशनसम्म पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि उनीहरु खुमलटारबाट टाढिएको स्पष्ट हुन्छ ।
बुधवार कुराकानी गर्ने क्रममा स्थायी कमिटी सदस्य थापाले पूर्वएमालेभित्रको गुटमा खेलेर समीकरण नबनाउन सुझाव दिँदा आफूहरुलाई प्रचण्डले सल्लाह र छलफलमा बोलाउन छाडेको बताए । प्रचण्डले पुराना र सिनियर नेताहरुलाई उपेक्षा गरेका कारण आफूहरु टाढिएको उनको गुनासो छ ।
पूर्वमाओवादीभित्र अरु पनि नेताहरुले ओली र प्रचण्डबीचको समझदारीमै जोड दिएको, तर आफूहरुको सुझाव नमान्दा प्रचण्ड संकटमा फस्दै गएको थापाको विश्लेषण छ । पार्टी एकता टुंग्याउने सन्दर्भमा प्रचण्डको भूमिका सकारात्मक नदेखिएको थापाले सुनाए ।
पूर्वमाओवादी नेता थापाले भने, कमरेड प्रचण्डले जुन स्टेप चाल्नुभयो, यो पार्टी एकताको सन्दर्भमा र पछिल्लो चरणमा दुईटा अध्यक्षको बीचको द्वन्द्व व्यवथापनको सन्दर्भमा उहाँका स्टेपहरु एकतावादी भएनन् । उहाँका स्टेप समीकरण बनाएर शक्ति हत्याउन केन्द्रित भए ।
थापाले नेकपा स्थायी कमिटीमा अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने परिस्थिति बन्यो भने त्यसको विपक्षमा अर्थात दुवै पक्षमा नलाग्नेको तटस्थहरुको संख्या बहुमतमा पुग्ने दाबीसमेत गरेका छन् ।
प्रस्तुत छ, पछिल्लो समय प्रचण्डसँग टाढिएका स्थायी कमिटी सदस्य थापासँग गरेको कुराकानी–
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक एउटा अध्यक्षले स्थगित गर्नुभयो, अर्को अध्यक्षले बहुमत सदस्यको बैठक राख्नुभयो । स्थगन आधिकारिक हो कि बैठकचाहिँ आधिकारिक ?
ती दुवै आधिकारिक होइनन् । हाम्रो मुख्य भनाइ के हो भने दुईटै अध्यक्षले सहमतिमा बैठक बोलाउनुपर्छ र सहमतिमै स्थगन वा अन्त गर्नुपर्छ । त्यहाँ दुवैमा सहमतिमा भन्दा पनि दुईटै अध्यक्षको बीचको अन्तरविरोध देखापर्‍यो । अब त्यहाँ भेला भएपछि बैठक भन्ने कुरा त एउटा होला, तर मंगलवार जुन दृश्य देखियो, त्यो भनेको अध्यक्षबीचको अन्तरविरोधको ‘क्लाइमेक्स’ हो ।
अब यो क्लाइमेक्सले पार्टीलाई कुन दिशामा लैजान्छ ? विभाजन कि एकता ?
यसले बैठक स्थगित गर्ने कुरालाई पनि मान्यता दियो र बैठक सञ्चालन गर्ने पनि बेठिक भयो भनेन । त्यो बैठक वा भेलाले पनि दुईटा अध्यक्षबीचको सहकार्य नै पार्टीको मूल स्पिरिट हो भन्ने स्वीकार गर्‍यो । दोस्रो कुरा, त्यो बैठकले नयाँ कोर्सका बारेमा छलफल गर्‍यो ।
बामदेव कमरेडले त्यहाँ नयाँ प्रस्ताव (६ बुँदे) प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसले सचिवालय र स्थायी कमिटीको शक्ति सन्तुलनमा अलिकति फरक पार्‍यो भन्ने मलाई लागेको छ ।
त्यो भनेको कस्तो हो ?
नेकपाभित्र एउटा विचार, हाम्रो पार्टी एकताको मुख्य प्रिन्सिपल अनुसार सहमतिबाट नै सबैखालको निर्णय गरिनुपर्छ र अबको एकता महाधिवेशनसम्म सहमतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यो सहमति भनेको दुईटा अध्यक्षहरुको सहमति हो । अब पनि त्यही प्रिन्सिपलअनुसार जानुपर्छ भन्ने मत हो त्यो ।
अर्को मतचाहिँ अब बहुमतका आधारमा जानुपर्छ भन्ने आयो । सचिवालयमा हाम्रो बहुमत छ, स्थायी समितिमा हाम्रो बहुमत छ, केन्द्रीय समितिमा हाम्रो बहुमत छ भने बहुमतका आधारमा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मत हो त्यो ।
तर, मंगलबारको उहाँहरु (प्रचण्ड माधव पक्ष) को बैठकले पनि सहमतिमा जानुपर्छ भन्यो । अर्को कुरा बामदेवको नयाँ प्रस्तावले सचिवालयको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आयो । स्थायी कमिटीका केही कमरेडहरुले पनि सहमतिबाटै जानुपर्छ र हिजो पार्टी एकता हुनेबेला दुईटा अध्यक्षको जुन कार्यविभाजन भएको थियो, त्यही नै अहिले पार्टी एकताको आधार हो भन्नुभएको छ । मूल रुपमा हिजोको बैठकले यही कुरा स्थापित गरेको हुनाले मलाई लाग्छ, नकारात्मकबाट फेरि पनि सकारात्मक दिशामा गयो अब चीज ।
मंगलबारदेखि सचिवालयको शक्ति सन्तुलन फेरि केपी ओलीको पक्षमा गयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
निश्चितरुपले त्यहाँ जेखालको प्रस्ताव वामदेव कमरेडबाट आयो, त्यो प्रस्ताव धेरै स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुको पनि भावनाअनुसार आएको छ । जनता र कार्यकर्ताको पनि दुईटा अध्यक्षको बीचको सहकार्य होस् भन्ने नै हो ।
गुटबन्दी गर्ने र विचारका आधारमा होइन, गुटबन्दीका आधारमा पावर शेयरिङ गर्ने कुरा गलत हो
हिजो त्यो कुराचाहिँ सचिवालयका एकजना जिम्मेवार नेताले प्रस्तुत गरिरहँदा त्यसले शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्यायो र अब सहमतिकै आधारमा जानुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । यसले स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिलाई पनि प्रभावित पार्छ र यही बाटोमै जानुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ ।
सचिवालयको शक्ति सन्तुलन त फेरबदल भयो होला, तर समग्रमा बहुमतलाई अल्पमतले बन्धक बनायो भन्न त सकिन्छ नि होइन ?
बहुमतको मान्यता हुँदैन भन्ने कुरा त होइन । तर, अहिले हाम्रो पार्टी एकताले पूर्णता प्राप्त गरिनसकेको परिस्थितिमा सहमतिबाट जानुपर्छ भन्ने मान्यता नै मूल कुरा हो । ‘बहुमत शो’ गर्ने साथीहरुले सहमतिबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा भुलेर आफूलाई ‘ओभर इस्टिमेट’ गर्नुभयो । त्यो कुराले नै पार्टी एकतामा खतरा उत्पन्न भयो । तर, हिजोको उहाँहरुको बैठकबाट फेरि सहमतिकै लिकमा ल्याएको छ । यो मूल रुपमा ठीक छ ।
तपाईं मंगलबारको बहुमत स्थायी कमिटीको बैठकमा किन जानुभएन ? तपाईंलगायत पूर्वमाओवादी खेमाका चार/पाँचजना नेताको अनुपस्थिति संयोगमात्रै हो कि जानी–जानी नजानुभएको हो ?
हामी सल्लाह गरेर नगएको होइन । तर, एउटाले स्थगित गरेर अर्काले बैठक बोलाएपछि त्यहाँ अन्यौल भयो । केही अन्तरविरोध पनि भयो । त्यसकारण त्यहाँको उपस्थितिले व्यक्तिगतरुपमा त्यति धेरै मूल्य राख्दैन र यसो गरिनुहुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्यो । अर्कोचाहिँ हामी पार्टी एकताको पक्षधर भएको हुनाले कुनै गुटमा नलागेर पार्टी एकताकै पक्षमा उभियौं । त्यहाँ केही प्राविधिक त्रुटीहरु पनि रहे ।
प्राविधिक त्रुटीहरु भन्नाले के ?
एउटाले बैठक स्थगित गर्ने, अर्कोले बोलाउने कुरा भयो । कुन चाहिँलाई हामीले सत्य मान्ने ? त्यसै दौडिने कुरा भएन ।
तर, यसले पूर्वमाओवादीका सबै सदस्यहरु प्रचण्डसँग रहेनन् भन्ने सन्देश त गयो नि ?
होइन, हामी अहिले प्रचण्डकै साथमा रहनुपर्छ भन्ने रहेन । हामी त नेकपाको साथमा रहने हो । हामी पूर्वसमूहकै आधारमा प्रचण्डकै साथमा, ओलीकै साथमा वा माधव नेपालकै साथमा बस्ने हो भने यसले नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आधार बनाउन सक्दैन । त्यसरी पूर्वसमूह र पूर्वगुट समातेर बस्दा गलत हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।
प्रचण्डसँग तपाईं लामो सहकार्यमा रहनुभयो, उहाँले यसपटक चालेको स्टेपमा किन साथ दिनुभएन ? उहाँको पछिल्लो स्टेपप्रति तपाईंहरुको असन्तुष्टि हो ?
कमरेड प्रचण्डले जुन स्टेप चाल्नुभयो, यो पार्टी एकताको सन्दर्भमा र पछिल्लो चरणमा दुईटा अध्यक्षको बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा उहाँका स्टेपहरु एकतावादी भएनन् । उहाँका स्टेप एकताको पक्षधर र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने खालका भएनन् ।
कमरेड प्रचण्डको स्टेप पावर शेयरिङ गर्नेतर्फ मात्र भयो । उहाँले हामीले भनेको पनि धेरै सल्लाह मान्नुभएन । उहाँलाई हामीले भनेका थियौं– तपाईं समीकरणमा नजानुस् । तपाईंको झगडा परे पनि, एकता भए पनि कमरेड केपी ओलीसँगै हो ।
हामीले प्रचण्डलाई भनेका हौं– तपाईं दुईटा प्राधिकार नेता हो र हाम्रो प्रिन्सिपलले पनि दुईटै नेताको सहमति र सहकार्यलाई नै पार्टी एकताको सिद्धान्त मानेको छ । अभ्यास पनि त्यही भएकाले केपी ओलीसँगै मिल्नुस् भनेर हामीले भनेको हो ।
तर, उहाँको बढी जोड के रह्यो भने एउटा समीकरण बनाएर पावरमा पुग्ने खालको बढी अभ्यास भयो भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो । त्यसकारण प्रचण्डसँग हाम्रो नमिलेको भनेको पार्टी एकता कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा उहाँ र हाम्रोबीच बिचार मिलेन ।
पार्टी एकताको सन्दर्भमा उहाँको भूमिका के भयो र ?
त्यहाँ अलिकति ग्याप भयो । पार्टी एकतालाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्नेमा ओली कमरेडको भूमिका अलिकति प्रगतिशीलजस्तो हामीलाई लाग्यो । दुईटा अध्यक्षकै बीचको सहमति उहाँले भन्नुभयो । अब कमरेड प्रचण्डको कुरा बढी के भयो भने ओलीसँग नै मेरो संघर्ष हो । मुख्य संघर्ष ओलीसँग भएकाले यसलाई टुंगो लगाउन अरुसँग समीकरण गर्नु मेरो गल्ती होइन, जायज हो भन्नुभयो । तर, उहाँको त्यो कुरा हामीलाई जायज लागेन ।
अरुसँग समीकरण भन्नाले पूर्वएमालेभित्रको समीकरण हो ?
त्यो त प्रष्टै देखियो नि । प्रचण्ड र माधव नेपाल गुट नै बन्यो । उहाँहरुका सयौं मिटिङहरु भए । ती सयौं मिटिङहरु त्यति धेरै जायज थिएनन् । पार्टीलाई निर्माण गर्न र रुपान्तरण गर्न नेताहरुबीच बैठक हुनुपर्छ । तर, ओली कमरेडलाई हटाउने वा शक्ति आफ्नो हातमा पार्नेखालको पुरानो रुढीवादी कम्युनिस्ट खालको संघर्ष भयो यो ।
गुटबन्दी गर्ने र विचारका आधारमा होइन, गुटबन्दीका आधारमा पावर शेयरिङ गर्ने कुरा गलत हो । यो कुरामा हाम्रो उहाँसँग कुरा नमिलेकै हो । त्यो फरक मत अहिले बाहिर पनि देखिएकै छ ।
प्रचण्डले पूर्वएमालेको गुटभित्र पस्नु हुँदैन थियो । उहाँले सबै हिसाब–किताब कमरेड केपी ओलीसँगै गर्नुपर्‍थ्यो । पूर्वएमालेको जो छ, त्यसलाई केपी ओलीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । पूर्वमाओवादीको प्रचण्डले नै गर्नुपर्छ । यो कहिलेसम्म भन्दा, एकता महाधिवेशनसम्म ।
अहिलेको तपाईंहरुको प्रचण्डसँगको फरकमत स्थायी कमिटीमा मतदानको चरणसम्म पुग्यो भने के हुन्छ ? प्रचण्डलाईनै साथ दिनुहुन्छ कि,अर्कै हुन्छ ?
मतदानमा त जानुहुँदैन भन्ने छ हाम्रो । हामी महाधिवेशनसम्म जाँदा दुवै अध्यक्षको अस्तित्व र मूल्यलाई कायम राख्न मेहनत गर्छौं । बहुमत र अल्पमतमा पुगियो भने त दुर्घटना भइहाल्छ । हिजो देखिहाल्नुभयो नि, उहाँहरु बहुमत र अल्पमतमा पुग्न सक्नुभएन ।
हिजो उहाँहरुको निर्णय के थियो भने स्थायी कमिटीको भेला वा बैठक जुन भयो, त्यहाँ त कमरेड केपी ओलीलाई स्थायी समितिको बहुमत देखाएर एउटा पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गर्ने भन्ने थियो । तर, त्यो त काम लागेन । त्यो त कसैले स्वीकार गरेन र निर्णय गर्न सक्नुभएन । बरु उहाँहरुले निर्णय के गर्नुभयो भने सहमतिकै आधारमा जाने ।
अल्पमत–बहुमतमा जानुहुँदैन भन्ने संख्या स्थायी कमिटीमा निर्णायक हुन सक्छ ?
होइन होइन, बहुमतमा यो मत हुन्छ । स्थायी समितिमा हामीले मतदानको आधारमा निर्णय गर्नु हुँदैन भनेका छौं र यो संख्या बहुमतमा छ । बहुमत संख्या पार्टी एकताको पक्षमा हुन्छ । पार्टी एकता भनेको के त भन्दा दुईटा अध्यक्षकै बीचको एकता हो । दुईटा अध्यक्षकै बीचको पावर शेयरिङ हो । त्यो कसरी मिलाउनुहुन्छ, उहाँहरुको कुरा हो । हामीले सहयोग गर्नुपर्छ ।
तपाईंहरु झम्सीखेलको अँगेनोदेखि खुमलटारसम्मका भेलामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय प्रचण्ड निवासमा जान छाड्नुभएको कि नबोलाइएको हो ?
होइन, खुमलटारमा पछिल्लोपटक जुन भेला भयो र त्यसले १३ गतेको स्थायी समिति बैठक बस्ने या नबस्ने र बस्यो भने त्यसले के निर्णय गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्‍यो, त्यो भेलामा पूर्वमाओवादीतर्फका सिनियर नेताहरुलाई बोलाइएन । जस्तो हरिबोल गजुरेललाई बोलाइएन । टोपबहादुर रायमाझीलाई बोलाइएन । हामी त सिनियरमा पर्दैनौं, हाम्रोचाहिँ त्यति हिसाब–किताब छैन ।
तर, उहाँहरु सिनियर नेता र प्रचण्डलाई लामो समयसम्म सहयोग गरिरहेकालाई नबोलाइसकेपछि नयाँ ढंगको प्रश्न पूर्वमाओवादीभित्र उठेकै हो । यसको हल नहुँदासम्म उठ्छ ।
आशंका त यस्तो पनि छ कि पूर्वमाओवादीका नेतालाई प्रधानन्त्री ओलीले मन्त्री बनाउने लगायतका आश्वासन र प्रलोभनहरु दिनुभयो रे नि ?
त्यस्तो त होइन । हामीले आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई शंका गर्नुभएन । भाँडिए कि ? किनिए कि ? यस्ता कुराले राजनीतिकरुपमा ‘डेभिएसन’ हुन्छ । उहाँहरुले त्यसरी शंका गर्नुभयो भने त्यो डेभिएसन हुन्छ । हामीले एजेण्डामा समर्थन र बिरोध गर्ने हो ।
प्रचण्डले पूर्वमसालको धारासँगको सम्बन्ध विस्तारै कमजोर बनाउँदै गएको भन्ने पनि चर्चा छ नि ? तपाईं पनि पूर्वमसालको नेता होइन ?
पछिल्लो चरणमा त्यस्तोखालको भयो भन्ने छ । साथीहरुको त्यो शंका पनि होला । पुराना साथीहरुलाई भुल्ने, नयाँ साथीहरुलाई अलिकति सम्झिने भएको हो कि ? जनयुद्धबाट आएको हुनाले जनयुद्ध भएको क्षेत्रमा अलिकति उहाँको लगाव हुनु स्वभाविक छ ।
तर, उहाँले स्थितिको सही मूल्यांकन गर्नुपर्छ । नेकपा बनिसकेपछि अब सबैको इतिहासको नयाँ मूल्यांकन हुनुपर्छ । अब जनयुद्धको मूल्यांकनले मात्र पुग्दैन । जनआन्दोलनको मूल्यांकनले मात्र पनि पुग्दैन ।
प्रचण्ड अस्ति साउन ३ गते जसरी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावमा सहमत हुनुभयो भनियो, एकल अध्यक्ष बन्ने कुरा पनि भयो भनियो, राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि परिबन्दमा परेँ पनि भन्नुभयो । यस्तो किन भयो होला ?
दुईटा अध्यक्षबीचको पछिल्लो द्वन्द्वचाहिँ त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ । प्रचण्ड कमरेड मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने सहमतिबाट ब्याक जसरी हुनुभयो, जुनसुकै लजिक उहाँले दिए पनि त्यो उहाँको सुविधाजनक परिस्थिति थियो । त्यहाँबाट ब्याक हुन हुन्थेन र त्यसमा कुनै दुविधा थिए भने छलफल गर्नुपर्‍थ्यो ।
उहाँहरुले त्यसलाई पूर्णता दिएर प्रस्तावकैरुपमा स्थायी कमिटीमा ल्याउने र केन्द्रीय समितिमा ल्याएर गर्ने ल्याकतबाट आउनुपर्‍थ्यो । तर, उहाँ पछि हट्नुभयो । जुनसुकै तर्कले पछि हटे पनि त्यो तर्कसम्मत भएन ।
अहिले तपाईंहरुले पार्टीमा देखाउने भूमिका र नेतृत्वलाई दिने सुझावचाहिँ के हो त ?
समग्र समाधान त चैतमा महाधिवेशन भनिएको छ, त्यो महाधिवेशन नै समग्र समाधान हो । त्योभन्दा अगाडि पार्टी एकता पूर्ण भएको छैन, त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्‍यो । त्योबेलासम्म पार्टी एकता गर्ने बेलाको जुन सिद्धान्त बनेको थियो, दुई अध्यक्षको कार्य विभाजनको बेसलाइनमा टेकेर महाधिवेशनबाट नयाँ लिडरशीप, नयाँ पार्टी र नयाँ विचारको निर्माण गर्नुपर्छ ।
याे समाचार हामिले अनलाइन खबरबाट साभार गरेका हाैं ।
प्रकाशित भएको : July 30th, 2020
ओलीलाई प्रचण्डको काउन्टर धेरै नउचालिनोस थेचारिनु पर्छ…
फेरी दिय ओलीले प्रचण्ड -माधवलाई चुनौती ,सके…
क्याम्पस प्रमुखले तेरो बाउ भने पछि उग्र…
के आई लाग्यो यो सबैको ढोका चाहर्दै…
नेकपा ओली समुहको स्थाइ समिती बैठक स्थगित…
पार्टी एकता फेरी पनि हुन्छ तेहा बामदेव…